I-CloudScrape iyisiqulathi esisekelwe kwisiphequluli sewebhu kunye nomhleli we-intanethi esinceda ukukhangela inani elikhulu leenkcukacha ngaphandle kweengxaki. Isinika isibonelelo sokugcina idatha kwiiplathi ezahlukeneyo zokugcinwa kwefu ezifana neBhokisi..umnatha kunye neGoogle Drive. Ungakwazi nokugcina idatha yakho kwifom ye-CSV ne-JSON. Ngenye yezona zinkonzo ezinamandla kakhulu kunye neenkcukacha eziseleyo kwi-intanethi ezikunceda ukuhamba ngezaziso, zizalisa iifom, zakha iirobhothi kwaye zichonga idatha yesikhathi sangempela.
I-Visual Web Ripper isisombululo esisodwa sokumisa idatha yewebhu, ukukhutshwa komxholo kunye nokuvunwa kwewebhu. Ngenye yeenkcukacha ze-intanethi ezinamandla kunazo zonke kwi-intanethi. Isixhobo siqokelela idatha kwimiyalezo yomibini kunye nomfanekiso. Emva koko luhlela idatha ngokusekelwe kwiimfuno zakho kunye neziphumo zihlala zixabisekileyo kwaye zincedo.